”Xisbiga Himilo Qaran wuxuu isku dayay inuu colaado ka huriyo Galmudug” – Xildhibaan hadlay | Hadalsame Media
Home Wararka ”Xisbiga Himilo Qaran wuxuu isku dayay inuu colaado ka huriyo Galmudug” –...
”Xisbiga Himilo Qaran wuxuu isku dayay inuu colaado ka huriyo Galmudug” – Xildhibaan hadlay
(Dhuusamareeb) 03 Dis 2019 – Xildhibaanka Cabdixakiin Maalin oo dhowaan laga saaray Xisbiga Himilo Qaran oo uu hoggaamiyo Sheekh Shariif ayaa markii ugu horreeysey arrintaa ka hadlay, isagoo xisbiga ku eedeeyay qas abuur. Wuxuu qoraalkiisa ku bilaabay:
”Waxaan soo dhaweynayaa aqblaadda uu Xisbiga Himilo Qaran ee aan ka tirsanaa ku oggolaaday inaan isaga tago xubinnimada xisbiga, maadaama aan isku ku aragti ka noqon waynay arrima masiiri ah oo aan xallin weynay.
”Xubnaha Xisbiga qaarkood waxaan aad ugu kala aragti duwanaanay isku day ay wadaan siyaasiyiinta qaarkood oo ah in colaado laga huriyo deegaanka aan anigu matalo ee Dhuusamareeb, iyo guud ahaan Galmudug, si fowdadaas looga dhex raadiyo dana siyaasadeed oo aan u arkayay in aysan deegaanka dani ugu jirin.” ayuu yiri waloow aanu carrabaabin kuwa ay yihiin siyaasiyiintaasi.
”Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan isku aragti ka noqonay arrimaha ku saabsan dhismaha Dowlad Goboleedka Galmudug oo ka shaqeynteedu ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan ku matalo dadka iyo deegaanka Galmudug taas ayaana keentay in xubnaha qaar ay u cuntamiwaysay.
”Ma jiro ciidan Itoobiyaan ah oo aan kan AMISOM ahayn oo dhuusamareeb jooga, laakiin waxaan rabaa in aan caddeeyo Marnaba in aanan raalli ka noqonaynin, in Ciidan Itoobiyaan ah iyo mid kale toona ay farageliyaan nidaamka doorashada ee Galmudug, sidoo kalana lama aqbali karo in buunbuunis iyo been abuur lagu dhaawaco hannaanka dib u heshiisiin iyo doorasho ee galmudug.
”Qofka awoodi waayay in uu ka tarjumo baahida deegaanada kala duwan ee dalka ma filaayo in uu awoodi karo hogaaminta guud ee dalka iyo dadka soomaaliyeed.” ayuu kusoo afjaray.
Xisbiga Himilo Qaran weli kama jawaabin eedaymahan.
Previous articleDEG DEG: Leonel Messi oo markii 6-aad qaatay Ballon d’Or
Next articleWAR CUSUB: AC Milan oo doonaysa Lionel Messi & Pep Guardiola ama Mbappe & Klopp (Sababta ay ku dhici karto)